Ny fanazaran-tena tsara indrindra ho anelanelany
Yoga ho an'ny vao manomboka
Inona no akanjo sy fitaovana ilainao amin'ny fanazaran-tena yoga?
Fa maninona no tsara ho an'ny vatana sy fanahy ny yoga? Tsy misy fanontaniana momba izany: manahirana ny fotoantsika. Mihazakazaka avy amin'ny fotoana iray mankany amin'ny iray hafa isika, mila mahazo an'io sy io "vita" isan'andro ary mazava ho azy fa maniry handroso amin'ny fiainana isika, hahazo vola bebe kokoa, hividy trano, hanana asa tsara kokoa ary ... toy izao na Toy izany koa, mamaritra ny tanjontsika amin'ny fiainana isika ary mifikitra amin'izany.
Yoga ho an'ny vatana sy fanahy
Tsy mahagaga raha lany fofonaina isika indraindray. Ary rehefa tsapantsika amin'ny farany fa tena tsy azo atao intsony io, dia efa tara loatra, atahorana ho may ny afo ary tsy afaka miasa mandritra ny volana maro isika.
Yoga ho an'ny fifandanjana anaty
Saingy afaka manao zavatra momba an'io isika mialoha. Afaka mangina ny fiainantsika - farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy - mampiady saina. Zava-dehibe fotsiny ny fampidirantsika ireo fotoana fitsaharana. Satria izay sitrana ihany no afaka manome throttle feno indray. Izay mamerina mametaka hatrany ny bateria dia tsy mila miady mafy amin'ny famonoana. Yoga dia tsara ho an'ny vatana sy fanahy. Ireo izay manao yoga dia tsy maintsy mifantoka amin'ny tenany sy ny vatany. Ny fanazaran-tena malefaka dia mamela ny fialan-tsasatra, fa mampiofana ny hozatra koa.
Fantatra hatramin'ny 700 BC fa tsara ho an'ny vatana sy fanahy ny yoga. any India. Na izany aza, ny teny hoe yoga dia nampiasaina.
Midika izany fa fanazaran-tena mifoka rivotra ary manaisotra ny saina.
Ny yoga dia misy fanazaran-tena ara-batana sy ara-tsaina marobe toy ny fisaintsainana, fiankinan-doha, yama, niyama, asanas, pratyahara, pranayama ary kriyas. Ny yoga dia midika zavatra toy ny firaisana na fampiraisana. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny hevitry ny fihenan'ny vatana manohitra ny fanahy. Satria mandritra ny fampiharana yoga dia manangona ny sainy ny mpitsabo ary mifantoka amin'ny fahatongavana ho "iray" amin'Andriamanitra.
Misy karazana yoga maro karazana
Any Eropa Andrefana sy Amerika Avaratra dia takatra amin'ny ankapobeny ny dikan'ny fanaovana fanatanjahan-tena. Marina anefa fa ny yoga dia tokony ho an'ny vatana sy fanahy ary avy eo dia manambatra ny fisaintsainana sy ny fampihetseham-batana.
Ny yoga dia naseho fa misy fiatraikany tsara amin'ny vatana sy fanahy. Izy io dia afaka manampy amin'ny fanalefahana aretina isan-karazany. Ny yoga dia tsara amin'ny fanalefahana ny fanaintainan'ny lamosina, ny torimaso na ny aretin-kozatra, ary koa ny tebiteby, fahaketrahana ary aretin'andoha mitaiza.
Ny yoga dia tena loharanon'ny angovo ho an'ny vatana sy ny fanahy. Satria ny yoga dia misy vokany mizana sy mampitony ary afaka manamaivana ny vokatry ny fihenjanana. Ireo izay manao fanazaran-tena tsy tapaka dia hahatsapa ny vokadratsin'ny yoga.
Misy karazany maro ny yoga. Efa nipoitra talohan'i Kristy, yoga dia nivoatra ary niova hatrany hatrany, ka misy zavatra ho an'ny rehetra. Misy karazana yoga izay manokana manokana amin'ny fanamafisana ny vatana sy ny hafa izay manokana kokoa amin'ny fisaintsainana.
Karazana yoga mahazatra dia ny Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga ary Bhakti Yoga. Na dia ireo aza no tena karazana yoga, dia misy karazana yoga maro hafa - subspecies, style, ary làlana izay nivoatra rehefa nandeha ny fotoana tany amin'ny faritra samihafa eran'izao tontolo izao.
Das Raja Yoga ahitana ny ambaratonga valo rehetra ary amin'izany dia misy ny fitsipi-pitondrantena etika, ny fitsipi-pifehezan-tena, ny fifehezana ny fofonaina, ny fampiofanana ary ny fanadiovana ny vatana, ny fisintomana ny fahatsapana avy amin'ny tontolo ivelany, ny fifantohana amin'ny eritreritra iray, fisaintsainana ary fahatsiarovan-tena.
Raja Yoga midika hoe ny fifandraisan'ny mpanjaka amin'ny olombelona sy Andriamanitra amin'ny endrika fifandraisana feno fitiavana.
Jnana Yoga midika hoe fahalalana, fahendrena na fahalalana. Ny firaisana amin'ny fifantohana amin'ny hetsika iray ary miezaka ny hanafaka amin'ny alàlan'ny fahalalana. Ao amin'ny Jnana Yoga dia tsy misy fampiharana ara-batana na ara-pisefoana manokana, ny iray dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fahaizana voajanahary hanavahana ny tontolo mandalo amin'ny fisehoana sy ny toetran'ny tsy toetrantsika.
Karma Yoga dia ny yoga amin'ny fihetsika. Karma no làlana ara-panahy manan-danja indrindra any India ary midika asa na asa. Ao amin'ny Karma Yoga dia tsy misy fanao manokana toy ny fampihetseham-batana na fisaintsainana, satria io dia fanovana kokoa ny fihetsika anaty ao anatiny. Karma Yoga dia azo ampiharina amin'ny fiainana andavanandro, tsy mila manokana fotoana fanampiny ianao amin'izany. Fa kosa, ny fanaovana izay tokony hatao amin'ny toe-javatra rehetra mba hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra.
Hatha yoga dia malaza be any aminay any Andrefana ary io no teny yoga mahazatra anay. Hatha Yoga dia mifantoka amin'ny fanamafisana ary amin'ny fanatsarana ny vatan'olombelona, ​​misy fiantraikany amin'ny saina sy ny fahatsiarovan-tena ary ambonin'izany rehetra izany dia mampianatra ny fahafaha-manao sy ny faharetana.
Anisan'ny fomba haingana indrindra hivoarana ny Kundalini Yoga endrika yoga mavitrika. Natao hanampiana anao hahatratra ny fifandanjana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy izany.
Das Bhakti Yoga mihazakazaka toy ny tanjona voajanahary amin'ny andavanandrom-piainana manontolo ary misy mihoatra ny hira rehetra an'ny mantra Vaishnava. Ity karazana yoga ity dia mitady ny fifandraisana misy eo amin'ny zavamananaina sy ny avo indrindra amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena feno fitiavana. Mihevitra ireo mpitsabo fa ny vatany ihany no ipetrahany ary miova ny zava-drehetra.
Ho an'ny maro amintsika, tsy dia manana ora firy ny andro. Matetika no manahirana ny maka fotoana hanaovana kilasy yoga. Satria amin'izany fotoana izany zavatra hafa, izay mety manan-danja, no latsaka eny amoron-dalana.
Ny fanazaran-tena ho an'ny yoga eo anelanelany dia noforonina mba hahafahanao manao azy ireo na aiza na aiza anananao minitra vitsy. Raha mila miala sasatra kely ianao dia afaka mandeha indray ny fivezivezenao ary miala sasatra ny hozatrao amin'ny fanazaran-tena yoga eo anelanelany.
Ho an'ny fanazaran-tena yoga eo anelanelany dia tsy mila tsihy na lamba firakotra ianao ary azonao avela aza ny kiraronao.
Mba hampitoniana ny lamosinao, mijoroa amin'ny tongotra iray, aondrohy ny lamosin'ny iray hafa ary tazomy amin'ny sandrinao rehefa atsofohy mankany ambony ny sandry iray hafa ary aforeto indray ny felatananao. Tano mandritra ny 30 ka hatramin'ny 60 segondra ity fanazaran-tena ity.
Ny hazo dia endrika yoga mahazatra tazominao mandritra ny 30 ka hatramin'ny 60 segondra. Mba hanaovana izany dia mijoroa amin'ny tongotra iray indray ary aondriho ny ilany iray hafa, ka voatsindry ambony ny feny ilay tongotra manohana. Mandritra izany fotoana izany dia ahinjiro ambonin'ny tananao ny sandrinao ary tsindrio miaraka ny felatananao mba hamorona teboka lava.
Ny telozoro koa dia iray amin'ireo fampihetseham-batana yoga fanta-daza eo anelanelany sy manenjana ny hozatra sy hozatra fototra. Mba hanaovana izany, manaova lavaka lava mandroso ary kasiho amin'ny tananao ankavanana ny tongotrao havanana ary atodiho mankany amin'ny tongotra ankavia ny vatanao.
Ny fomba tsara indrindra hanaovana an'ity fanazaran-tena ity dia ny fipetrahana mitsangana amin'ny seza, apetraho ao ambadiky ny tendanao ny tananao ary ahodiho ny sorokao amin'ny làlana mifanohitra. Ity fanazaran-tena ity dia vita indray mandeha isaky ny lafiny ary tokony hatao mandritra ny 20 segondra.
Ho an'ity fanazaran-tena yoga ity, mijoroa mahitsy ary atosiho ny lohalinao ary miezaha hikasika ny rantsan-tànanao amin'ny rantsan-tànanao. Raha malefaka manokana ianao, dia azonao atao ny manandrana mandohalika amin'ny tendron'ny oronao.
Raha minitra vitsy fotsiny ianao hanaovana fanazaran-tena iray na iray hafa, dia ho hitanao fa ho tony kokoa ianao any am-piasana sy amin'ny fotoana malalaka anananao.Fa satria tsy manafana alohan'ny fanazaran-tena izahay dia tokony hanao fanatanjahan-tena tsara.
Raha miseho amin'ny haavon'ny adin-tsaina avo indrindra mandritra ny herinandro isika, indraindray dia tonga amin'ilay fotoana tsy ahafahantsika intsony intsony: Ny loha toa feno eritreritra isan-karazany, tsy afaka mifantoka amin'ny eritreritra iray akory ianao, marary ny hozatra ary mahatsapa ianao raha tsy izany dia mandringa sy ritra.
Ny yoga ho an'ny vao manomboka dia afaka manampy anao hahay handanjalanja kokoa, ho tony sy ho tony. Manampy anao hahatsapa ho tsara indray amin'ny vatanao ihany koa ny yoga. Yoga dia mifampiraharaha amin'ny olona iray manontolo. Manampy amin'ny fiainana atiny sy fiainana sambatra izany.
Ireo vao manomboka ny yoga dia mahatratra ny vokatra tsara indrindra amin'ny fifantohana voalohany amin'ny fampiasan'ny vatana, ny asanas. Manampy amin'ny fikarohana hoe aiza ny fihenjanana ary ahoana ny fanamaivanana azy.
Ny fampihetseham-pofonaina koa dia manampy ireo vao manomboka ny yoga hiala sasatra. Satria ny fofonaina dia taratry ny toetranao. Ny fampihetseham-pofonaina, izay mahatonga ny fofonaina ho mora sy mikoriana, dia manampy amin'ny fanalefahana ny saina ary hahafantatra izay zava-dehibe amin'izao fotoana izao.
Izay mahatsapa ihany amin'ny farany fa "manenjika" zavatra iray tontolo andro izy, dia mila mianatra fa tsy afaka mamoaka fihenjanana fotsiny amin'ny "fihainoana ny tenany". Io ihany no fomba hisorohana io fifanenjanana io amin'ny ho avy. Ny fitsipika dia ireo izay miato ihany amin'ny farany no afaka mahatsapa zavatra.
Mba hianarana yoga dia tokony handray fampianarana ireo vao manomboka. Satria amin'ny alàlan'ny fampiharana ampianarina amin'ny fampianarana yoga ho an'ny vao manomboka, ny vao manomboka mianatra mivelatra amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny vatana. Satria ny mpampianatra yoga efa niofana dia mijery akaiky ary afaka miresaka amin'ny fihetsika tsy manintona.
Ireo izay manomboka yoga dia tsy tokony hanantena ny ho afaka hanao ny zava-drehetra aorian'ny fotoana vitsivitsy. Satria ny yoga dia fivoarana mandritra ny androm-piainana ary, indrindra indrindra, fizotry ny fianarana. Izay manao fanazaran-tena tsy tapaka ihany no afaka mianatra miatrika ny vatany ary mifandanja tsara. Zava-dehibe noho izany ny fikarakarana am-pitiavana sy am-pitoniana ny vatanao ary omena fotoana hifehezana ny fanazaran-tena.
Zava-dehibe ihany koa ny tsy tokony hanapotika ny tenany ireo vao manomboka. Ny boky misy contortions tsy mampino dia tsy boky vao manomboka amin'ny yoga. Aleo mitady fifandanjana tsara eo amin'ny zavatra azo atao sy izay ilaina. Rehefa dinihina tokoa, ny fanazaran-tena dia tokony hanompo fahasalamana, fahasalamana ary hery manasitrana amin'ny farany. Ary rehefa tonga amin'izany ianao dia fantatrao fa ny kely kokoa indraindray dia betsaka kokoa.
Manakaiky ny kilasy yoga voalohany ary mipetraka ny fanontaniana hoe iza amin'ireo fitaovana no mety amin'ny yoga. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fitafiana mety amin'ny kilasy yoga:
Manaova akanjo milay. Ny pataloha malalaka na leggings milay kokoa dia tsara lavitra noho ny pataloha tery misy paosy. Zava-dehibe ihany koa ny fisafidianana akanjo lava sy rivotra.
Amin'ny volana ririnina manokana dia aleonao manao ba kiraro amin'ny kilasy yoga. Na izany aza, marina ny manao ny fanazaran-tena tsy mitanjaka.
Any amin'ny ankamaroan'ny sekoly yoga, ny mpampiasa dia afaka mindrana tsihy yoga sy sakana. Satria raha te hanandrana ianao raha tena marina ny yoga, dia tsy te hividy fitaovana feno avy hatrany ianao. Raha manapa-kevitra ny hividy matro yoga ianao, dia alao antoka fa tsy manify loatra izany, raha tsy izany dia mety hanana olana mora foana amin'ny lohalinao na ny lamosinao ianao.
Ilaina ny matotra yoga hahafahanao manao ny fanazaran-tena tsy misy kapa ary hanana fijoroana matanjaka. Ireo izay miofana amin'ny tany fotsiny dia mety ho solafaka ary handratra ny tenany.
Ka tsy mila akanjo na fitaovana manokana ianao amin'ny kilasy yoga voalohany. Fa kosa, ny fahatsapana ho tsara sy fanaovana akanjo mahafinaritra. Sweatpants sy T-shirt dia ampy.
Misy akanjo yoga manokana, saingy tsy ilaina izany. Zava-dehibe kokoa fa ny akanjo nofidianao dia mamela anao hanana fahalalahana mihetsika mba hahafahanao manatanteraka tsara ireo fanazaran-tena. Hamarino fotsiny fa tsy lava loatra na malalaka ny akanjo, raha tsy izany dia afaka misavoritaka mora foana ianao na mandeha tongotra lava be pataloha.
Jereo izay tsapanao aorian'ny fanaovana yoga. Matetika isika no mahatsiaro ho salama kokoa aorian'ny ora vitsivitsy voalohany. Malalaka kokoa ny saintsika, milamina ny hozatra ary mahazo aina isika. Satria ny yoga dia tsy, toy ny fanatanjahan-tena maro hafa, momba ny fifaninanana mihoatra ny tsirairay, fa kosa ny fananganana fahatsapana tsara momba ny vatanao. Maro ireo vao manomboka amin'ny yoga no mamaritra fa rehefa afaka ora vitsivitsy dia matory tsara izy ireo, mipetrapetraka ary efa mahazaka kokoa.
Izay miady amin'ny fetra ara-batana dia afaka mampiasa fehy, fehy ary kojakoja mitovy amin'izany mba hanamorana ny fanazaran-tena.
Ny scarf misaintsaina dia mety ho manan-danja ho an'ny iray na ny iray hafa. Izy io dia miantoka fa tsy mihamangatsiaka ny vatana mandritra ny fisaintsainana ary mahatsapa ho voaro ny iray.
Mandritra ny fotoana maharitra, ny yoga dia afaka manampy anao hihena, hanangana fahatokisan-tena very ary hamerina ny fiainanao handeha amin'ny laoniny.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 8. Aprily 2020 15. Jolay 2021 Sokajy WellnessKeywords Mitonia, fialam-boly, fisaintsainana, ny yoga, Yogaübrungen
indray Lahatsoratra taloha: Perfume | fahadiovana manokana
more Lahatsoratra manaraka: Fialan-tsasatra amin'ny fahasalamana | fialan-tsasatra